Nwere ike ugbu a ịkpọ oku vidiyo site na WhatsApp beta | Akụkọ akụrụngwa
Oku vidiyo dị ugbu a na WhatsApp beta
Otu n'ime atụmatụ kachasị atụ anya na WhatsApp bụ Oku oku na anyị nwere ugbua ruo oge ụfọdụ. Otu ihe ahụ na-eme na oku vidiyo, na karịa ebe anyị mụtara na otu ndị otu ngwa ozi izizi ụwa na-arụ ọrụ a.
Ọ bụ n'oge a mgbe na WhatsApp si beta beta, ị nwere ike iji oku vidiyo iji kpọtụrụ ndị enyi ma ọ bụ ezinụlọ site na ọdịyo na vidiyo. Otu ihe dị mkpa ị nwere ike ịnwe ma ọ bụrụ na imelitela WhatsApp na beta site na mmemme Google Play.
Ọrụ a na - enye gị ohere ịkpọ oku vidiyo site na akara ngosi ekwentị ahụ na windo mkparịta ụka. Mgbe ịpịrị ya, ị ga-enweta nhọrọ abụọ, oku ọdịyo na oku vidiyo. Nke a bụ otu o si egosi m na emelitere ngwa ahụ nkeji ole na ole gara aga site na Playlọ Ahịa Google.
O kwere omume na, ọbụlagodi na imelite nke beta kachasị ọhụrụ, ị nwetaghị nhọrọ oku vidiyo, ọ bụ ezie na enwere ụzọ nwee ike ịmanye ya mgbe ị na-ehichapụ data ngwa ma malite ya dị ka a ga-asị na ị rụnyere ya nke mbụ. N'ezie, cheta ịme otu mkparịta ụka ị nwere tupu ịme nke a iji mee ka ebido oku vidiyo na WhatsApp.
Ọ bụrụ na onye natara oku vidiyo enweghị nhọrọ ma nọ n'ọrụ, ga-abanye na oku ọdịyo dị ka ọ dị na nnọkọ vidiyo ị nwere naanị otu igwe okwu.
Nnukwu ihe ọhụụ maka WhatsApp taa na nke ahụ amaba na mpi megide Skype na ọtụtụ ọrụ ndị ọzọ "na-achị" n'ụdị a kemgbe ọtụtụ afọ. Isi ihe ọzọ na WhatsApp ka gbatara n'ime izu Google bidoro Duo dị ka gị anwale na ụdị nke video ọkpụkpọ ọrụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Oku vidiyo dị ugbu a na WhatsApp beta
Huawei anaghịzi ezobe nwunye ọhụrụ 9 ma bipụta akwụkwọ mmado na-egosi ọsọ ya
Xiaomi Mi Rịba ama 2 bụ onye ọrụ ugbu a mgbe ogologo echere